Google Colab သို့မဟုတ် Google Colaboratory - အဲဒါ ဘာလဲ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Google Colab သို့မဟုတ် Google Collaboratory - အဲဒါဘာလဲ
ဣဇာက်သည် | 30/11/2021 08:41 | ယေဘုယျ
သေချာပေါက် ကြားဖူးမှာပါ။ Google Collaboratory၊ Google Colab ဟုလည်း ခေါ်သည်။ဒါမှမဟုတ် မြောက်အမေရိကကုမ္ပဏီရဲ့ ဒီပလက်ဖောင်းအကြောင်း သင်ပထမဆုံးအကြိမ် ဖတ်ဖူးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့၊ ၎င်းနောက်ကွယ်ရှိအရာများနှင့် သင့်ပရောဂျက်များတွင် ပါဝင်နိုင်သည့်အရာအားလုံးကို ကောင်းစွာသိရန် အရေးကြီးသည်၊ ၎င်းသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဝိသေသလက္ခဏာများရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤပလပ်ဖောင်းသည် အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဉာဏ်ရည်တု၊ စက်သင်ယူမှု, အ Python ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား...
1 Google Collaboratory ဆိုတာဘာလဲ။
2 Google Colab အင်္ဂါရပ်များ
Google Collaboratory ဆိုတာဘာလဲ။
Google Collaboratory သို့မဟုတ် Colab၊ ၎င်းသည် Google Research မှ နောက်ထပ် cloud ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူတိုင်းကို ၎င်း၏အယ်ဒီတာတွင် အရင်းအမြစ်ကုဒ်ရေးပြီး ဘရောက်ဆာမှ လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် IDE တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ၎င်းသည် Python ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကို ပံ့ပိုးထားပြီး စက်သင်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များစသည်တို့အတွက် ဦးတည်ထားသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုကို အခြေခံ၍ ဂျူပီတာမှတ်စုစာအုပ်၊ လက်ခံကျင်းပသည်။ သင်၏ GMail အကောင့်ဖြင့် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။၊ ၎င်းသည် configuration မလိုအပ်ပါ၊ Jupyter ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား ၎င်း၏ဆာဗာများ၏ GPGPUs ကဲ့သို့သော သင့်ကုဒ်ကို တည်းဖြတ်စမ်းသပ်နိုင်စေရန် ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့တစ်ခုခုကြောင့်၊ Google Collaboratory တွင် အကန့်အသတ်မရှိ အရင်းအမြစ်များ မရှိသည့်အပြင် အာမခံချက်မရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် စနစ်အား ပေးထားသည့် အသုံးပြုမှုအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များကို ဖယ်ရှားပြီး ပိုမိုရယူလိုပါက၊ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Colab Pro သို့မဟုတ် Pro + စာရင်းသွင်းမှု.
သင့်အကောင့်ဖြင့် Colab ကို သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါ သင်ရရှိသည့်အရာမှာ အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ခွဲထုတ်ထားသည့် သင့်ကုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည့် virtual machine တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပြဿနာများရှိလျှင် သင် virtual machine ကို မူလအခြေအနေသို့ ပြန်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ MV တွင် ကုဒ်အချို့ကို လုပ်ဆောင်ပြီး ဘရောက်ဆာကို ပိတ်ပါက၊ အရင်းအမြစ်များ ကင်းစင်ရန် လှုပ်ရှားမှုမရှိသည့် ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက် စက်များကို ဖယ်ရှားပစ်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို သိမ်းဆည်းထားပါက သင့်တွင် သင်၏မှတ်စုစာအုပ်များကို GDrive တွင် ရှိလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို စက်တွင်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည် (open source Jupyter ဖော်မတ် .ipynb)။
Google Colab အင်္ဂါရပ်များ
Google Collaboratory ကိုသင်ဝင်ရောက်သောအခါတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဖော်ရွေသော၊ အလိုလိုသိပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပတ်ဝန်းကျင်. အမှန်တော့၊ ၎င်းတွင် စာရွက်စာတမ်းနှင့် အကူအညီပါရှိသော အညွှန်းတစ်ခုအပြင် သင့်ပထမခြေလှမ်းများကို စတင်ရန်၊ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သော ကုဒ်များကို ပြုပြင်ရန်နှင့် စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာအချို့ပါရှိသည်။
Entre အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို Google Collaboratory ၏ အထင်ရှားဆုံးမှာ-
Python ကုဒ်ကို တည်းဖြတ်ပြီး ဖွင့်ပါ။
သင့်ပရောဂျက်များကို မဆုံးရှုံးစေရန် Google Drive (GDrive) တွင် သိမ်းဆည်းပါ။
GitHub မှ ကုဒ်များကို အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။
မှတ်စုစာအုပ်များ (စာသား၊ ကုဒ်၊ ရလဒ်များနှင့် မှတ်ချက်များ) ကို မျှဝေပါ။
Jupyter သို့မဟုတ် IPython မှတ်စုစာအုပ်များကို သင်တင်သွင်းနိုင်သည်။
မည်သည့် Colab မှတ်စုစာအုပ်ကို GDrive မှ ပြည်တွင်းသို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ယေဘုယျ » Google Colab သို့မဟုတ် Google Collaboratory - အဲဒါဘာလဲ